Iimaski zokwahlula izinwele. Iindlela zokupheka ezincinci zeemfesi zeenwele zendlu.
Kule nqaku siza kukunika iinketho ezininzi zobomi bokunika ubomi kunye nokubuyiselwa kweenwele ezahlukileyo. Kodwa okokuqala, makhe sibone isizathu sokuba izinwele ziqhekeke.
Izinwele ze-Sekushchiesya zibonakala ngathi ngenxa yokunyamekela okungafanelekanga, kunye nokusetyenziswa kwezindlela ezingalunganga ekufezeni ubuhle. Ukusetyenziswa kwefuthe lemichiza, ukulungiswa, ukucafaza ngeentsimbi ezinamandla kunye nokuvusa ukuma kwawo, kwaye, njengoko kwaziwa, ikhokelela kwicandelo lesiphambano. Inkqubo ibonakala njengale: kwiingcebiso zeenwele, izikali ezikwinqanaba langaphandle lezinwele ziqala ukuphakama kwaye zinamathela kuzo zonke izikhokelo. Ngenxa yoko, iinwele ziqala ukwahlukana kwaye zixhomekeke ekupheleni. Ukuba le ngxaki iqalisiwe, ke umthwalo ungasasazeka kwixesha lonke lobude bezinwele, ziza kuncipha kwaye zibe zincinci kwaye zinyanzele. Zonke iintlobo zezinto ezinobungozi ziyakwazi ukungena ezingenakunyulwa kwiziko leenwele, ekuhambeni kwexesha ziya kufa. Ewe, ukuba akayi kuphuka ngaphambi kokuba afe xa edibanisa.
Iimbangela zokunyuka kweenwele
Isizathu esibalulekileyo nesona sibalulekileyo sokwahlukana kwezinwele kukuma kwawo. Ukusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zeekhemikhali zithetha iinwele - i-liquid ukulungiswa okanye ukunyusa iinwele, ukusebenzisa idayi yeenwele, naziphi na iinkcukacha ezicacileyo, njl., Sidala zonke iimeko zokuma kwazo. Kwakhona, kuvunyelwe ngokukodwa ukuhlamba iinwele ngesepha, kuba phantse ngokupheleleyo, ebangela ingozi enkulu. Kwaye kwizinwele, nangona emva kokuba uhlambisile intloko yakho, kufuneka kubekho umncinci we-sebum owenza izikali kwiqokebhe yayo.
Indawo yesibini kwindawo yokutshatyalaliswa kweenwele eziphilileyo, ezingenayo i-split, kukho zonke iintlobo zokubakhombisa ukulungiswa kwazo, iintambo zengqungquthela, i-thermalbugs, i-hairdryers, njl njl. Emva kwakho konke, banqumla izinwele zabo ngokufudumala kwabo, ngenxa yoko kuba buba buthathaka kunye brittle. Ukunyuka kweenwele kungakhokelela kunye namanzi ngezinga eliphezulu lokuqina, umzekelo, unjalo lwamanzi olwandle.
Ngokwemvelo, umntu kufuneka athi kwakhona kungekuphela nje kwimpembelelo yangaphandle, kodwa kunye nezinto zangaphakathi zomzimba wakho zingakhokelela kwingxaki yokunyuka kweenwele. Ngokomzekelo, ukuba unakho iivithamini okanye i-metabolism, enokubangela izinwele ezomileyo.
Ukuba ungumnikazi weenwele ezinde, ngoko nawe unokujamelana neengxaki ezinjalo njengenwele ekwahlukileyo. Emva kwakho konke, ngexesha apho ulusu lweentloko zenziwe nge-sebum, alufikeli ekupheleni kweenwele, ezikhokelela ekumeni kwawo. Ngenxa yolu, izikali ekupheleni kweenwele ziyi-unstuck. Ngoko ke, siye safumana indlela yokunceda iinwele zethu ezihluphekileyo, ezinomileyo. Kule ngxaki siza kunceda ama-mask. Ngokuqhelekileyo, ngexesha lethu awukwazi ukukhathazeka ngokuzilungiselela ukuzinya kweenwele zeenwele, kuba kwiindawo zokulala ebumnyameni babo kubumnyama. Kodwa, ungaphambuki, uthengise iimpahla ziquka zonke i-chemistry efanayo esifuna ukuyichitha, ukwenzela ukuphucula iinwele zethu. Kodwa kwiindlela zokwenza izilwanyana zomntu zonke zendalo. Azingabangeli ukusabela okwenzakalayo kwaye zenze zibe nezindleko eziphantsi.
Ukupheka kweemaski zokunyuka kweenwele
Umzekelo, imask yogurt. Faka isicelo kwi-scalp kunye neenwele, ubisi olufudumeleyo umzuzu omalunga nama-30, uze uhlambe ngamanzi afudumele. Ngenxa yoko, ufumene iinwele ezinqabileyo kunye nezikhanyayo. Kwanele iinkqubo ezintathu eziba zibalaseleyo ngobubele kunye nakwibala. UKefir uyomeleza iinwele, akhuphe ukukhupha kunye nokuma.
Ungasebenzisa kwakhona imaski yeqanda, esetyenziswe kwisiqhekeza kwaye isasazwa kuzo zonke iinwele malunga nemizuzu engama-30-40. Ukwenza oko, kufuneka uthathe i-yolk enye yeqanda, i-tablespoon ye-lemon juice, kunye neoli eninzi yemifuno kwaye udibanise nesiqingatha seglasi yamanzi abilisiwe. Okokuqala kufuneka ihlanjwe kumanzi apholileyo, kwaye ihlanjwe kwisisombululo esinjalo: kwithayitha enye yamanzi, qhafaza ipoyiji enye yelisi yelamula. Le mask inondla ikhowudi yekhanda, ilungisa isakhiwo seenwele, idala umqobo ekulahlekelweni kwamanzi.
Ukuze ulungiselele imaski yokunyuka kweenwele, ungasebenzisa i-peach enekhono lokurhoxisa kunye nokuvala izikali ngokuhlula izinwele. Ukwenza oku, kufuneka uhlaziye uphinde udibanise iiperesi ezimbini, faka iitapuni ezintathu zobisi olusenyongweni, amaconsi ayisithandathu eoli ye-oregano. Imaski kufuneka isetyenziswe kwiinwele kwaye ihlanjwe ngamanzi afudumele kunye ne-shampoo emva kwemizuzu engama-30-40.
Kukho kwakhona i-mask yobusi ngeemigqomo yokuhlukana. Le mask inceda ukuqinisa nokuphucula izinwele. Ukuze wenze le maskki, kufuneka uthathe isipuni esisodwa se-honey, ezine ezinezipuni zee-anyanisi, okufuneka udibanise, kwaye ungeze kule mxube enye ithispoon yomnquma ofudumeleyo okanye ioli yemifuno. Faka isicelo semaski kuyo yonke ubude beenwele uze uhlambe ngamanzi apholileyo kunye ne-shampoo emva kwemizuzu engama-50.
Ukunceda iinwele ezikhethiweyo zibuye zifike ngokugqithisileyo kunye ne-ukhilimu omuncu. I-Horseradish inceda ukuqinisa ukukhupha kwegazi kwisikratshi, ngelixa iinwele eziqinisa, kwaye ziqala ukukhula ngokukhawuleza. Kwaye ukhilimu omuncu unomhlaba wokunciphisa ukutshatyalaliswa kwe-horseradish kunye nokunyusa iinwele zeenwele. Ukulungiselela le maskki kufuneka udibanise enye ingcambu ye-horse radish ngokukhawuleza, kwaye isitya se-ceramic sixube kunye nepunipoon eyodwa ye-ukhilimu omuncu kunye nomlinganiselo ofanayo weoyile yemifuno. Emva kokufaka i-mask kwizinwele, kufuneka zifakwe kwi-polyethylene kunye nethawula imizuzu engama-30. Emva koko uhlambe ngamanzi afudumele kunye ne-shampoo.
Ukongeza kwiimaski zeenwele ezisele zahlukana zingabandakanywa ekukhuselweni kwesi simo esingathandekiyo. Kunokwenzeka ngendlela eqhelekileyo kwaye ngokufanelekileyo ukujongana neenwele ezi ngxaki. Nantsi oku kufuneka ukwenze oku:
Geza iinwele zakho ngokwezinga lokungcola kwaye ukhethe i-shampoo efanelwe nawe;
Emva kokuhlamba kweenwele zonke kufuneka usebenzise i-conditioner efanelekile kubo;
Zama ukubamba ngobumnene iinwele zakho, usebenzisa ikhefu lomthi kunye ne-brush, eya kunceda ukusabalalisa i-sebum ngeenwele.
Zama ukungasebenzisi i-dryer kunye nezinye izixhobo zombane ezigqithiseleyo iinwele zakho.
Ungasebenzisi idayi ngaphezu kwexesha ngenyanga. Ngoku ungasebenzisa iidyayi ezincinci ezingenayo i-non-ammonia.
Ezi maski ezilula zokwahlula iinwele ekhaya ziya kukuvumela ukuba unikezele ngononophelo lweenwele ezintle kwaye uzinze kwaye zingabonakali!
I-Shampoo yokukhula kweenwele
Indlela yokugcina ukukhanya kweenwele
Unyango lweenwele ezibuhlungu
Yintoni eyenza ukulahleka kwentloko?
Uyazi njani ukuba uthetha ntoni kumntu?
Iimvini ezigqithwe kwi-oven
Ungatshintsha njani into ebomini bakho
Impembelelo yokulala emzimbeni womntu